ဘုရားသခင်အသံကြားရန် သဘောထားကြီးသော စိတ်ဓါတ် ပျိုးထောင်ရမည်။
Hope Wednesday9March 2011
“မျိုးစေ့ကြဲသောသူသည် မျိုးစေ့ကိုကြဲခြင်းငှါ ထွက်သွား၏။ အစေ့ကို ကြဲသည်တွင် အချို့သောအစေ့တို့သည် လမ်း၌ကျသဖြင့် ကျော်နင်းခြင်းကိုခံရ၍ မိုဃ်းကောင်းကင်ငှက်တို့သည် ကောက်စားကြ၏။” (လု ၈း၅)
လုကာ ၈ တွင် သခင်ခရစ်တော်က မြေဆီလွှာ ၄ လွှာ၏ ပုံပမာ (ဥပမာ) ကို အသုံးပြု၍ ဘုရားသခင်၏ စကားပြောသံ ကိုကြားရန် သော့အနေဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ကိုပေးသည်။
သခင်ခရစ်တော်အချိန်က လယ်သမားများမှာ လယ်ထွန်စက်၊ အစေ့စိုက်စက် တို့မရှိကြသေးပါ။ မျိုးစေ့ကြဲရန်၊ မျိုးစေ့အိတ် ကိုယူ၍ အပြင်မှာ အစေ့များကိုကြဲ ရသည်။ အစေ့များသည် မတူညီသောမြေဆီလွှာ များပေါ်သို့ ကျကုန်ကြသည်။ အစေ့ များသည်စတင်၍အပင်ပေါက်သည် ကြီးထွားလာသည်၊ အသီးသီးလာသည်၊ ကျရောက်ခဲ့ရသော မြေဆီလွှာ ပေါ်မှာ မူတည်ကြလေသည်။
ဤပုံပမာ (ဥပမာ)တွင် လယ်သမားသည် ဘုရားသခင်ကို ကိုယ်စားပြုသည်။ မျိုးစေ.သည် ဘုရားသခင်၏တရားစကားကို ကိုယ်စားပြုသည်။ မြေဆီလွှာသည် မတူညီသော အမျိုးအစား (၄)မျိုး၏ တုန့်ပြန်မှု၊ ဘုရားသခင်ကြိုးစာ၍စကားပြော သည့်အခါသင်ရမည်၊ ကို ကိုယ်စားပြုသည်။
ဘုရားသခင် စကားပြောသည်ကို သင်ကြားလိုပါက၊ သဘောထားကြီးသော စိတ်ဓါတ်ပျိုးထောင်ရမည်။ သင်သည် လိုလိုလားလား၊ အဆင်သင့်ဖြစ်သော၊ စိတ်ထက်သန်စွာ နားထောင်လျှင် သူဘာပြောသည်ကိုဖမ်းယူနိုင်မည်။
သခင်ခရစ်တော်ပြောသော မာသော မြေဆီလွှာ (လူသွားလမ်း) ရှင်လုကာ ၈ တွင်ပါသည်၊ ဘုရားသခင်၏စကားကြားခြင်း ကို လူတစ်ဦး၏ ခံနိုင်ရည်အကြောင်းပြောသည်။ သဘောထားကျဉ်းမြောင်းပြီး၊ စိတ်နှလုံးမာကျောသော၊ လူသွားလမ်း ကျဉ်းလိုလူ သင်သိတဲ့သူတစ်ဦးတစ်ယောက်ရှိပါသလား။? သင်ဘုရားသခင်အကြောင်းဘာဘဲပြောပြော၊ ထည့်သွင်းမစဉ်း စားဘဲ သူတို့နားမထောင်ကြပါ၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် သူတို့သည် ကြိုတင်၍ သူတို့စိတ်ကူးအတိုင်းလုပ်ထားကြသော ကြောင့်။
တခါတလေ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင် ပြောရန်အခွင့်မပေးကြပါ။ ကိုယ်စိတ်ကူးနှင့်ကိုယ်၊ စိတ်နှလုံးကမာကြောပြီး၊ နားထောင်ခြင်စိတ်မရှိပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည် စိတ်မာပြီး၊ အမြင်ကျဉ်းမြောင်းကြသည်။
ဘယ်အရာက အမြင်ကျဉ်းမြောင်းစေသနည်း။? စိတ်ကိုပိတ်စို့စေသည်အကြောင်း သုံးခုရှိပါသည်။
၁။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို တန်ဖိုးထားခြင်း။ ကျွန်တော်တို့က ဘုရားသခင်မလိုဘူးဟု ဆုံးဖြတ်ကြသည်။ အကြောင်းအရာအချို့ ကိုကိုယ်ဖါသာ ဖြေရှင်းနိုင်သောကြောင့်။ ကျွန်တော်တို့ ဆုမတောင်းကြပါ၊ မိမိတို့ပြဿနာ မိမိတို့ တာဝန်ယူနိူင်တယ်ဟု ဂုဏ်ယူခြင်းကြောင့်။
၂။ ကြောက်ရွံ့ခြင်း။ ဘုရားသခင်တခုခုပြောမှာကို ကျွန်တော်တို့ကြောက်နေသည်။ အကယ်၍သာ ကျွန်တော်တို့ မလုပ်ခြင်တာ တစ်ခုခုကိုလုပ်ခိုင်းမယ်ဆိုရင်?
၃။ ခါး ခါး သီး သီး။ ကျွန်တော်တို့သည် စိတ်ထိခိုက် နာကျဉ်းမှုဖြစ်စေပြီး ၊ထိန်းထားမည်။ ခွင့်လွှတ်ရန် မရွေးချယ်လျှင်၊ ကျွန်တော်တို့၏ စိတ်နှလုံးသည် မာကျောရင့်ကျက်လာမည်။ ကျွန်တော်တို့သည် ဘုရားသခင်၏ချစ်ခြင်း၊ ဘုရားသခင်၏စကား၊ နှင့် ဘုရားသခင်၏အသံတို့ကို ကာကွယ်ရေး နှင့် အတိုက်အခံဖြစ်လာသည်။
မာကျောသောနှလုံးသားကို ဘယ်လို ဖြေဖျောက်မှုပေးရမည်နည်း? “ထိုကြောင့်၊ ခပ်သိမ်းသောညစ်ညူးခြင်း၊ မနာလိုသောစိတ်လွန်ကျူးခြင်းကို ပယ်ရှား၍၊ သင်တို့စိတ်ဝိညာဉ် ကိုကယ်တင်နိုင်သော၊ အထဲ၌စိုက်ပျိုးသော နှုတ်ကပတ်တရားကို နူးညံ့သိမ်မွေ့သောစိတ်နှင့် ခံယူကြလော့။” (ယာကုပ် ၁း၂၁) အမိုက်သရိုက်များကို ပြစ်ပယ် လိုက်ပါ၊ တီဗွီ၊ ရုပ်ရှင်။ စာအုပ်၊ မဂ္ဂဇင်း၊ ကစားနည်းများ၊ နှင့် ကွန်ပြူတာ (website) ၊ များကို မမွေ့လျော်သင့်ပါ။ နိမ့်ချ၍ ဘုရားသခင်၏ စကားများကို လိုလားစွာလက်သင့်ခံပါ။
စကားစု၏သော့ချက်သည် “နိမ့်ချစွာ လက်ခံပါ” ဘုရားသခင်ကိုဆုတောင်းပါ၊ “ အိုထာဝရဘုရားသခင် ကျွန်တော် မှန်ကန်ကြောင်း အသိအမှတ်ပြုပါသည်။ ကျွန်တော်ကျိုးစား၍ အကောင်အထည်ဖေါ်ပါသည်၊ အလုပ်မဖြစ်ပါ၊ ထိုကြောင့် ဘုရားသခင်၏စကားကို နားထောင်ပါမည်။” ဒါဟာ ပထမခြေလှမ်းဖြစ်ပါသည်။